Inkantolo isikhabile isicelo seDA ngodaba lukaNomgcobo Jiba | News24
Inkantolo isikhabile isicelo seDA ngodaba lukaNomgcobo Jiba
Durban – Inkantolo eNkulu yaseNtshonalanga Kapa ikhiphe isinqumo sayo ngesicelo se-DA sokuxoshwa kukaNomgcobo Jiba, kubika iSowetanlive.
Leli qembu lafaka isicelo sokuba kuxoshwa uNomgcobo oyiSekela loMqondisi wezokuShushiswa koMphakathi kuZwelonke ngesikhathi esaphenywa ngekhono lokhe lokuhola leli hhovisi.
OLUNYE UDABA:Kuyathusa ukuqashwa kukaJiba : DA
I-DA yafaka lesi sicelo enkantolo ngenyanga kaNdasa bekhalaza ngokuthi ukuhluleka kukaMengameli uJacob Zuma ukumisa uJiba emsebenzini akukho emthethweni futhi kubonakalisa ukuthi ukhetha iphela emasini.
“I-DA ngeke ivumele ukuhluleka kukamengameli ekuthatheni izinyathelo kucekele phansi ezomthetho kuleli. Siyinhlangano sinethembe lokuthi inkantolo izokwenza lokhu okwahlula umengameli kwasekuqaleni,” kusho le nhlangano ngaphambi kukoba kushishwe lesi sinqumo.